Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Rom 7:1-25
Ihe atụ gosiri otú anyị si nwere onwe anyị n’Iwu Mosis (1-6)
Iwu Mosis mere ka a mata ihe bụ́ mmehie (7-12)
Mgba mmadụ na mmehie na-agba (13-25)
7 Ụmụnna m, ọ̀ ga-abụ na unu amaghị (n’ihi na ọ bụ ndị ma iwu ka m na-agwa) na ọ bụrụhaala na mmadụ nọ ndụ, Iwu ahụ* bụ nna ya ukwu? 2 Dị ka ihe atụ, iwu kwuru na nwaanyị lụrụ di ekwesịghị ịhapụ di ya mgbe di ya nọ ndụ. Ma ọ bụrụ na di ya anwụọ, iwu di ya ejighịzi ya.+ 3 N’ihi ya, mgbe di ya nọ ndụ, a ga-akpọ ya nwaanyị na-akwa iko ma ọ lụọ nwoke ọzọ.+ Ma ọ bụrụ na di ya anwụọ, iwu di ya ejighịzi ya. Ọ bụghị nwaanyị na-akwa iko ma ọ lụọ nwoke ọzọ.+ 4 Ụmụnna m, e sikwa n’ahụ́ Kraịst mee ka unu nwere onwe unu n’Iwu ahụ,* ka unu wee bụrụ ndị onye ọzọ nwe,+ ndị onye ahụ e si n’ọnwụ kpọlite nwe,+ ka anyị wee mịara Chineke mkpụrụ.+ 5 N’ihi na mgbe anyị na-ebi ndụ otú ahụ́ anyị chọrọ, ihe ọjọọ ndị na-agụ ahụ́ anyị agụụ, bụ́ ndị Iwu ahụ* mere ka a mata, nọ na-eme ka anyị na-eme mmehie. Mkpụrụ ọ na-amịkwa bụ ọnwụ.+ 6 Ma ugbu a, anyị enwerela onwe anyị n’Iwu ahụ*+ n’ihi na iwu ahụ ejighịzi anyị. N’ihi ya, ka anyị bụrụ ndị ohu maka na mmụọ nsọ na-edu anyị,+ ọ bụghị maka na iwu na-achị anyị.+ 7 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Iwu ahụ* ọ̀ bụ mmehie? Mbanụ! N’eziokwu, agaraghị m ama ihe bụ́ mmehie ma a sị na Iwu ahụ* adịghị.+ Dị ka ihe atụ, agaraghị m ama ihe bụ́ anyaukwu ma a sị na Iwu ahụ* ekwughị, sị: “Enwela anyaukwu.”+ 8 Ma ebe ọ bụ na e nyere iwu ahụ, mmehie chọtara ụzọ mee ka m na-enwe ụdị anyaukwu ọ bụla, n’ihi na mgbe iwu na-adịghị, mmehie nwụrụ anwụ.+ 9 N’eziokwu, mgbe iwu na-adịghị, adị m ndụ. Ma mgbe e nweziri iwu, mmehie dịwara ndụ ọzọ, mụnwa anwụọ.+ 10 M chọpụtakwara na iwu ahụ e nyere, nke kwesịrị ime ka m dị ndụ,+ meziri ka m nwụọ. 11 Ebe ọ bụ na e nyere iwu ahụ, mmehie chọtara ụzọ rafuo m ma gbuo m. 12 N’ihi ya, Iwu ahụ* dị nsọ, ihe e kwuru na ya dịkwa nsọ, zie ezie ma dị mma.+ 13 Ọ̀ pụtaziri na ihe dị mma kpataara m ọnwụ? Mbanụ! Kama ọ bụ mmehie kpataara m ya. Mmehie si n’ihe dị mma kpatara m ọnwụ iji mee ka a mata ihe bụ́ mmehie.+ Iwu ahụ si otú a gosi na mmehie jọgburu onwe ya.+ 14 N’ihi na anyị ma na Iwu ahụ* si n’aka Chineke, ma abụ m anụ ahụ́, e rekwara m ka m gbawara mmehie ohu.+ 15 N’ihi na anaghị m aghọta ihe m na-eme. N’ihi na anaghị m eme ihe m chọrọ ime, kama m na-eme ihe m kpọrọ asị. 16 Ma, ọ bụrụ na ihe m na-eme bụ ihe m na-achọghị ime, ekwetara m na Iwu ahụ* dị mma. 17 Ma ugbu a, ọ bụghịzi mụnwa na-eme ya, kama ọ bụ mmehie nke bi n’ime m na-eme ya.+ 18 N’ihi na ama m na e nweghị ihe dị mma bi n’ime m, ya bụ, n’ahụ́ m; n’ihi na m na-achọ ime ihe dị mma, ma anaghị m enwe ike ime ya.+ 19 N’ihi na anaghị m eme ihe dị mma m na-achọ ime, kama ọ bụ ihe ọjọọ m na-achọghị ime ka m na-eme. 20 Ma, ọ bụrụ na ihe m na-eme bụ ihe m na-achọghị ime, ọ bụghịzi mụnwa na-eme ya, kama ọ bụ mmehie nke bi n’ime m na-eme ya. 21 Achọpụtala m na ọ bụ iwu a na-achị m: Mgbe m chọrọ ime ihe dị mma, ihe ọjọọ na-abata m n’obi.+ 22 N’ime obi m, iwu Chineke na-amasị m.+ 23 Ma ana m ahụ na e nwere iwu ọzọ na-akpa ike n’ahụ́ m. Iwu a na-alụso iwu na-achị obi m agha.+ Ọ na-adọrọkwa m n’agha, mee ka m gbawara iwu mmehie nke dị n’ahụ́ m ohu.+ 24 Ahụsiela m anya! Ònye ga-anapụta m n’ahụ́ a nke na-akpatara m ọnwụ a? 25 Esi m n’aka Jizọs Kraịst Onyenwe anyị na-ekele Chineke. N’ihi ya, n’ime obi m, m na-agbara iwu Chineke ohu. Ma n’ahụ́ m, m na-agbara iwu mmehie ohu.+